राजनीतिक सल्लाहकारले पुनः शिक्षा शिविर बनाउने प्रस्ताव! : मार्टिन Vrijland
राजनीतिक सल्लाहकारले पुनः शिक्षा शिविर बनाउने प्रस्ताव!
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	10 डिसेम्बर 2019 मा	• 13 टिप्पणिहरु
CTP Veldzicht, स्रोत: youtube.nl
म यसको बारेमा वर्षौंदेखि लेख्दैछु र अब यो खुला छ कि राजनीतिज्ञहरूले पुनः शिक्षा शिविरहरू आह्वान गरिरहेका छन्। नेदरल्याण्ड्समा हामी यसलाई 'पुन: एकीकरण संगठन' भनेर चिनाउँदछौं, जस्तै चिनियाँ प्रान्त उयुरमा, तर अमेरिकामा जर्ज ओर्वेल समाचार पनि बोल्दैन।
हामीले डच भाषामा चलाखीपूर्वक 'हेरचाह' जस्ता शब्दहरू राखेका छौं। अमेरिकामा, राजनीतिक सल्लाहकार र मिडिया रणनीतिकारक रिक विल्सनले हिजो एक ट्वीट पोस्ट गरे जसमा उनले केवल "पुन: शिक्षा शिविर" भन्ने शब्दलाई बुझाउँछन्। हेर्नुहोस् र आफ्नै ध्यान दिनुहोस् ध्यान दिनुहोस्। हामी शर्त लगाउँछौं कि जब तपाईं खोपका लागि हुनुहुन्छ, तपाईंलाई वास्तवमै यो ठीक छ जस्तो लाग्छ?
एन्टी-भ्याक्सर्सहरू पुन: शिक्षा शिविरहरू, उनीहरूको सम्पत्तीको तत्कालको मौसम, र उनीहरूको बच्चाहरूलाई सुरक्षात्मक हिरासतमा राख्ने कडा तर्क र कडा तर्क हो। https://t.co/9vHPeEl9hf
- रिक विल्सन (@TheRickWilson) डिसेम्बर62019
एन्टी-भ्याक्सर्सहरू पुन: शिक्षा शिविरहरू, उनीहरूको सम्पत्ति तुरुन्तै जफत गर्ने र उनीहरूको बच्चाहरूको हिरासतका लागि कोर्रा र शक्तिशाली तर्कहरू हुन्।
तपाईं किन यो ठिक ठान्नुहुन्छ? किनभने तपाईंलाई मिडिया र यसका "विशेषज्ञहरू" ले भनेको छ कि जनसंख्या खोप नखानु खतरनाक छ। तपाईंलाई ती मिडिया र यसका "विज्ञहरू" द्वारा पनि भनिएको छ कि यी सबै षडयन्त्र सिद्धान्तहरू गलत छन्। यदि केहि थप व्यक्तिहरूले यस वेबसाइटलाई अलि धेरै पटक हेरेका थिए र सबै कलंकहरू पछाडि फर्केका भए, तिनीहरूले पत्ता लगाएका हुन सक्दछ कि नियन्त्रित विपक्षले प्रायजसो जानाजानी झूटलाई सत्यको साथ मिसाउँदछ, ताकि मिडियाले ती आत्म-निर्मित झूटहरूलाई सबै खोप बिरूद्धका विचारहरू हटाउन प्रयोग गर्न सक्दछ। लहर गर्न। त्यो नियन्त्रित विपक्षीको उद्देश्य हो र मैले यस वेबसाइटमा धेरै पटक वर्णन गरेको छु।
यद्यपि, अब मुख्य कुरा यो छ कि मानिसहरूमा सामान्य धारणा उत्पन्न भएको छ, जसले भन्छ कि यदि जनस population्ख्याको सानो हिस्सा खोप लगाईएन भने, यो (अप्रकाशित) समूहले बाँकीलाई खतरा निम्त्याउँछ। यदि अनावश्यक मानिसहरू बिरामी भयो भने उनीहरू खोप लगाईएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमित गर्न सक्दछन्। त्यसोभए, खोपले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छु भन्ने महसुस गर्न तपाईसँग दिमाग स्पष्ट छ? यदि व्यक्ति भाइरस विरूद्ध खोप लगाईएको छ र तिनीहरू बिरामी पर्छन् भने खोप स्पष्ट रूपमा राम्रोसँग काम गर्दैन।
हालसालैका वर्षहरूमा मैले धेरै पटक चेताउनी दिएँ कि हामी फासिस्ट शासनमा छौं र राज्यको विचारबाट विचलित भएका कसैलाई पनि जम्मा गर्ने र उनीहरूलाई रोक्न सबै कानूनहरू तयार भइसकेका छन। पुन: शिक्षा शिविरहरूको लागि यस अमेरिकी ठोस प्रस्तावको साथ, जनतामा स्वीकृति मापन गरिएको छ। ट्वीट अन्तर्गत मनपर्दो संख्याले देखाउँदछ कि कति जना व्यक्ति पहिले नै सहमत छन्। यद्यपि अभ्यासमा, नेदरल्याण्ड्समा असन्तुष्टहरूलाई घरबाट हटाउन सबै कानूनहरू पहिल्यैदेखि नै छ। अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य ऐन (WvGGZ) 2020 मा प्रभाव लिन्छ। त्यो कानूनले सम्भव तुल्याउँछ जुन अघिल्लो मन्त्रीको रूपमा स्थगित गरिएको थियो, अर्थात् व्यक्तिलाई अवलोकनको लागि कैद गर्नुहोस् र न्यायाधीश वा मनोचिकित्सकको हस्तक्षेप बिना औषधि प्रशासन गर्नुहोस् (हेर्नुहोस् यो विस्तृत विवरण).
तपाईले बुझ्नुभयो यसको मतलब के हो? तपाईंले यो महसुस नगरीकन, डच पुन: शिक्षा क्याम्पहरू पहिले नै महसुस भइसकेको छ। हामीले भर्खरै यो गरेका थिएनौं र हामीले तिनीहरूलाई "पुन: शिक्षा क्याम्प" भन्यौं। हामीले तिनीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा (GGZ) संस्था भनिन्छ।
हेगले प्रमुख दुरुपयोग र हत्याका मुद्दा पछि हस्तक्षेपको आह्वानको परिणाम स्वरूप सबै आवश्यक कानूनहरू पार गर्यो। केवल त्यस विस्तृत विवरणको निलो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् कि यी मनोवैज्ञानिक आपरेशनहरू (PsyOps) ले ती सबै कानूनहरू समात्न सक्षम भएका छन् (मानिसहरूले यो सोच्यो कि यो धेरै टाढा पुगेको छ बिना) )। यदि तपाईंले मिडियामा ठूलो सामाजिक प्रभावको समस्या ल्याउनुभयो भने, तपाईं मानिसहरूलाई क्रोधित, डराउने र भावनात्मक बनाउँनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई कानूनका लागि स्वीकृति मोडमा ल्याउनु भयो कि तिनीहरूलाई चाँडै वा पछि त्यसले आफैलाई असर गर्न सक्छ भन्ने बुझ्दैन।
त्यहाँ डच (GGZ) पुन: शिक्षा क्याम्पहरूमा पुन: शिक्षाको लागि धेरै alibis छन्:
स्कूल ट्रान्सजेंडर पाठसँग असहमत
विद्रोही विरोधी व्यवहार विकार (OOG)
विद्रोही विपक्षी व्यवहार डिसआर्डर (OOG) को पाठ्यक्रम धेरै व्यापक तान्न सकिन्छ। तपाईं कहिले विद्रोही विपक्षी हुनुहुन्छ? तपाईं यसको अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। स्पेक्ट्रम पूरा गर्ने कोटी पछिल्लो हो।
"Psychotic" को परिभाषा हेरौं। यो किनभने सबै कुरा कभर गरिएको छ। "साइकोटिक" शब्दसँग तपाइँ सायद पागल हुने मान्छेहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ र बालकनीमा चिच्याएर उभिनुभयो जसले आफैलाई डुबाउँदछ। होइन, तपाईं पहिले नै मनोवैज्ञानिक हुनुहुन्छ यदि तपाईंसँग "भ्रम" छ भने। प्रश्न पछि भ्रम को परिभाषा के हो पछ्याउँदछ।
Doctordokter.nl वेबसाइट एक वेबसाइटको अंश हो जसले मानिसहरूलाई "सही स्वास्थ्य सेवा" (solvo.nl) मा निर्देशन दिन्छ। त्यसोभए त्यो GGZ सँग सम्बद्ध क्लब हो। अनुसार त्यो वेबसाइट एक भ्रम को परिभाषा निम्नानुसार छ:
एक मनोविकृति को परिभाषा अनुसार (हेर्नुहोस् यहाँ) एक भ्रम मनोवैज्ञानिक संग कोही छ। यो यथार्थको विपरित हो भनेर पछि हुन्छ। ठूलो प्रश्न हो: कसले 'त्यो वास्तविकता' निर्धारण गर्दछ।
ठिक छः यदि राज्यले निर्धारण गर्दछ कि 'वास्तविकता' भनेको छ कि खोप तपाईंको लागि राम्रो छ, त्यो जलवायु उपायहरू आवश्यक छ किनभने विश्व अन्यथा 12 वर्षहरूमा क्षय हुनेछ (परिणामस्वरूप CO2 र ग्लोबल वार्मिंगको कारण), तपाईं अझै पनि तपाईंको लि gender्ग छ यदि तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं जन्मैसम्म केटा वा केटी हुनुहुन्न भने, यदि तपाईं "विश्वास वास्तविकताको विपरित हो" भने तपाईं दुर्भाग्य पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ 911 एक आन्तरिक काम थियो भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तब राज्यले पत्ता लगाउन सक्छ कि यो वास्तविकता भन्दा फरक छ र तपाइँसंग भ्रम छ।
परिभाषा पहिले नै त्यहाँ छ, कानून पहिले नै त्यहाँ छ, मनोविज्ञान पहिले नै तयार छन्। नेदरल्याण्ड्स आफ्नो पुन: शिक्षा क्याम्प भर्न सक्षम हुन युरोप मा पहिलो देश हो। को रुइनरवोल्ड साइकोप अदालतको आदेशको आवश्यकताको कारणले अन्तिम सीमालाई हटाएको छ; सर्च वारन्ट पनि भनिन्छ।
यो यस सन्दर्भमा हो कि मेरो सिफारिश छ कि तपाइँ पुस्तक "वास्तविकता जसरी हामीले यसलाई बुझ्यौं" पढ्नहोस्।
स्रोत लिङ्क सूची: doctordokter.nl, ypsilon.org
छापा सुरु भयो? साइंस को लागी 2018 मा Els Borst / बार्ट भ्यान U. केसमा आधारित हरित बत्ती पहिले नै दिइएको थियो
ट्याग: स्वीकृति, Anti-vaxxers, विशेष, GGZ, पुन-शिक्षा शिविर, पुन: शिक्षा शिविरहरू, EYE, विद्रोही विरोधी व्यवहार विकार, मनोविज्ञान, psychosis, psychotic, Tweet, भ्रम, भ्रम, भ्रमात्मक, भ्रम, WvGGZ
10 डिसेम्बर 2019 मा 05: 37
RIVM सुन्दर कथाहरू र हाँस्ने बच्चाहरूको साथ चित्रहरूको साथ वेबसाइट धेरै सुन्दर बनाएको छ। तर यदि तपाईले अझ राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाई साँच्चिकै पर्चाहरू पाउनुहुनेछ। दुर्भाग्यवश, मानिस समस्याग्रस्त किताब वा पत्रक पढ्नकोलागि लिन दु: खी छ।
त्यहाँ खोपले भाइरस सार्न सक्ने कुनै प्रमाणनीय प्रमाण छैन, तर यदि तपाईंसँग प्याकेज पुस्तिका छ भने यो सम्भव छ।
यो पनि स्पष्ट छ कि9बाट 12 महिनासम्म बच्चाहरूले खोपमा प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्।
तपाईको रक्तप्रवाहमा सीधा जानको लागि राम्रा चीजहरू होइन, सामग्री ध्वस्त पार्न पनि समस्या लिनुहोस्। यो विशेष गरी ती बच्चाहरूको लागि सही हो जसका दिमागमा अझै छुट्टै रक्तप्रवाह प्रणाली छैन।
तपाईं अदालतमा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट कथन भन्न सक्नुहुन्छ, हे पर्नुहोला यो कारणले गर्दा कानून परिमार्जन गरिएको छ। के तिनीहरूले तपाईंलाई अलग्गै राख्न सक्छन् ताकि तपाईं राम्रोसँग स्थापित कहानी भन्न सक्नुहुन्न?
10 डिसेम्बर 2019 मा 11: 50
मलाई यो विशेष लाग्छ कि तपाईंसँग न्यायपालिका छ
शंका को लाभ दिन्छ। हामी त्यसलाई त्यसरी राखौं। हामीलाई यो थाहा छ कि कसले साधारण जनसंख्यामा शासन गर्छन र न्यायपालिकामा उनीहरु बढी प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
10 डिसेम्बर 2019 मा 19: 16
न्यायपालिकाले विश्वास गर्दैन तर यदि तपाईसँग राम्रो प्रतिष्ठान भएको कहानी छ र यो बाहिर आयो भने तपाई सार्वजनिक दबावबाट जित्न सक्नुहुन्छ।
विलियम एस लेखे:
10 डिसेम्बर 2019 मा 11: 22
ती शिविरहरु पहिले नै त्यहाँ छन्, म, बिरामी अमेरिका, Fema शिविरहरु हो।
हामीसँग जानस्ट्याडमा एक छ।
10 डिसेम्बर 2019 मा 12: 43
कुनै "विरोधाभास" बिना "विरोधाभास"!
भोल्टेयर * तपाईले जे भन्छु म घृणा गर्दछु, तर मँ यो तपाईंको जीवनको साथ आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्ने छु।
मूल: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, corn me me battrai justqu'au bout pour que vous puissiez le dire।
10 डिसेम्बर 2019 मा 13: 13
त्यसकारण नेदरल्याण्ड्समा त्यो अधिकार अवस्थित छैन। के कानूनले भन्छ प्रतीक कानून र एक पक्ष हो यदि तपाईं यसलाई पाउनुहुन्छ। तपाईंको राय केटाहरूको हितमा यथास्थिति राय भन्दा फरक हुन सक्दैन।
10 डिसेम्बर 2019 मा 13: 04
एक धेरै कमजोर जीवित भाइरस वा मृत भाइरस कोषहरूको साथ एक एल्युमिनियम मिश्रणको एक स्वादिष्ट ककटेल सिरिंज। र त्यहाँ के छ? त्यो कहिल्यै स्वस्थ हुन सक्दैन वा यो हुन सक्छ? तर मँ एउटा लिन पनि छु किनकि अन्यथा म सम्बन्धित छैन। त्यसोभए म एक्लो महसुस गर्छु र हुन सक्छ म आफैंमा चुक्ने क्रम थाल्छु र त्यसपछि मलाई ड्रग स्प्रे दिनेछ जब उनीहरूले मलाई स्ट्रेटाजेकेटमा निकाल्छन्। हो, बरु सहयोग गर्नुहोस् र तपाईंको उपचार स्वीकार्नुहोस् किनकि यो अति आवश्यक छ! त्यहाँ तपाईसँग स्किजोफ्रेनिया, डर, उदासिनता वा आक्रामकता छ कि छैन भनेर हेर्न कुनै मापन उपकरण छैन। अझै मनोरोग विज्ञान स्कूल भन्दा तथ्य बिना पाठ्य पुस्तकहरूमा आधारित छ। उनीहरूलाई आफुसँग के छ भनेर राम्ररी थाहा छ र तपाइँले स्वीकार्नुपर्दछ कि तिनीहरू प्रासंगिक विशेषज्ञ हुन् कि होइनन्। खोकी
हालका वर्षहरूमा, यी जेलहरू बन्द छन्, जस्तै डोम र बिज्लमरबाजेज। उनीहरु अनावश्यक भएका थिए, उनले तिमीलाई भनिन, तर त्यो वास्तविक अमेरिकी मैक्स सुरक्षा कारागारबाट सुल्झाइयो, जुन निश्चय पनि एकदम आवश्यक थियो। मदुरोडमसँग अहिले राम्रो ट्रफी छ, अवश्य पनि पछाडि रहन सक्दैन। किनभने यस देशमा हामी बाँकी मानवताको तुलनामा सबै कुरामा उत्कृष्ट छौं। सब भन्दा कागजात उन्नत दासहरू यहाँ फेला पार्न सकिन्छ, किनकि हो सबै कुरामा सब भन्दा राम्रो।
10 डिसेम्बर 2019 मा 16: 58
नेदरल्याण्ड्समा धेरै दुरुपयोगहरू, अनौंठो कानूनहरू र उज्जवल भविष्य नीतिहरूमा आधारित हुन्छन् जुन कानूनमा समावेश हुन वा सक्दैन। यदि हामी त्यो नीति परिवर्तन गर्न चाहान्छौं, हामीले यसको बाबजुद नेदरल्याण्ड्समा मुख्य पद धारण गर्नेहरूलाई सोध्नुपर्नेछ र त्यसकारण नीतिलाई निर्धारण गर्नुहोस्, लिपिमा भएका केटाहरूले ती महत्वपूर्ण पदहरू छोड्न वा तिनीहरूलाई सामान्य जनसंख्यामा बाँड्न। तिनीहरूले त्यसो गर्दैनन् किनभने तिनीहरू शक्ति, पैसा, सुविधाहरू र ईमान्दिरको मजा लिन्छन् जुन साधारण व्यक्तिहरूले ती प्रमुख पदहरूमा आधारित छैनन्। हुनसक्छ किसानहरूले अझै पनि डिसेम्बरमा आउँदो प्रदर्शनहरूको साथ न्यानो क्रिसमस सुनिश्चित गर्न सक्दछन्, अवश्य पनि सबैले कानूनका लागि उत्तरदायीता राख्छन्। र केटाहरूले स्वेच्छाले उनीहरूको मुख्य पदहरू छोड्न चाहन्छन्। हुनसक्छ यो देश मा अन्त मा केहि हुँदैछ? मैले अझै यो देख्नु पर्छ। जे भए पनि किसानहरू, नागरिकहरू र बाहिरका व्यक्तिहरू मानिलिन्छन् कि तपाईं प्रत्येक मिनेट ट्याप हुनुहुनेछ। तर तपाईलाई थाहा छ, हैन?
11 डिसेम्बर 2019 मा 10: 49
नेदरल्याण्ड्समा पनि मानिसहरू छन् जो सोच्छन् कि त्यस्ता शिविरहरू एक राम्रो विचार हो।
प्रोफाइल फोटोले छोरीको साथ एक समलि .्गी जोडीले यस प्रतिक्रिया देखायो।
मैले धेरै चोटि लेखेको छु कि दोस्रो विश्वयुद्धको उद्देश्य केहि समूहहरूलाई दबाउनु थियो र त्यसपछि उनीहरूलाई अमूर्त स्थिति दिनु थियो। यीमध्ये एउटा जनसंख्या अहिलेको प्यालेस्टाइनमा रहेका शिविरहरूमा मानिसहरूलाई थिचोमिचो गर्दै छ र अर्को समूह पनि दमनकारी पार्टी बन्नेछ जुन एकाग्रता शिविरहरू ("पुन: शिक्षा शिविर") मा सहमत हुन्छन्। म अवश्य पनि एलजीबीटीआई समुदायको बारेमा कुरा गर्दैछु, जुन लि propaganda्ग प्रचारसँग असहमत मानिसहरूलाई यस्तो शिविरमा पठाइयो भने चाँडै नै राम्रो हुनेछ। (र यो 'क्याम्प' हुन्छ बेशक सरसफाई 'हेरचाह संस्था' द्वारा प्रतिस्थापित छ)
12 डिसेम्बर 2019 मा 21: 07
राम्रो जनसंख्या सबै ठीक छ।
तिनीहरू सबै क्रिसमसको सजावटहरूमा व्यस्त छन्। कस्तो प्रमोदवन यहाँ हुनुपर्दछ यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने।
जबकि उपस्थितिहरूले धोका दिइरहेका छन् यो बाहिरी संसारलाई सजावटको साथ बदल्ने प्रयास हो।
असल नागरिकहरूले mkutra- दिमागका दासहरू जस्तो व्यवहार गर्छन्
त्यो केवल खराब सामग्री दबाएर कार्य गर्न सक्छ। कति व्यक्तित्व औसत औसत नागरिक वास्तविकता संग सामना गर्न हुनेछ।
हुनसक्छ मैले केही सजावट पनि राख्नुपर्दछ। सम्राट सबै पछि ना naked्गो नहुन सक्छ। होइन म सफल हुन सक्दिन।
यस बर्ष कुनै सजावट छैन।
13 डिसेम्बर 2019 मा 09: 33
स्थिरता एजेन्डाको सन्दर्भमा एक बुद्धिमान निर्णय। 😉
16 जनवरी 2020 मा 12: 52
बिरामी एनएलमा पहिले नै शैक्षिक शिविर छ, यो जाँस्टाड हो।
त्यहाँ डच फेमा शिविर सम्भवतः बढी हुनेछ।
16 जनवरी 2020 मा 13: 19
हामी कारागारको हिसाबले सोच्छौं, तर त्यहाँ धेरै संख्यामा GGZ क्लिनिकहरू छन् जसले पुन: शिक्षा शिविरहरूको रूपमा काम गर्दछ र अनिवार्य GGZ भर्ना कानून (जुन जनवरी १, २०२० मा लागू भएको थियो) ती शिविरहरू भर्न एकदम सजिलो हुन्छ।
« बच्चाहरूलाई दबाब दिईएको ठूलो छ!
बैजनी शुक्रवार: कसरी स्कूलमा बच्चाहरू LGBTI प्रचारको साथ अभिभूत हुन्छन् »
कुल भ्रमण: 15.828.868